February 2018 – HORNAFRIC MEDIA
UEFA oo isbedello ku samaysay tartamada UEFA Champions League & Europa League
Posted on February 28, 2018 by Queen Kiin
UEFA ayaa soo saartay isbedello rasmi ah oo ay ku sameeysay hab-raaca Koobka Horyaallada Yurub ee UEFA Champions League iyo midka Europa League. Waxyaabaha wax laga bedeley waxaa ugu horreeya xilliyada ay soo gelayaan ciyaaraha Champions League oo laga dhigay labada jeer oo ay midi tahay 18:55CET iyo tii kale ee ahaan jirtey 20:45CET oo laga dhigay 21:00CET. ISBEDELLADa MUHINKA IHI WAXAY NOQONAYAAN SIDATAN: 1. 26 kooxood ayaa si toos ah u geli doona heerka…
Booliska Magaalada Leicester City oo Nolosha ku qabtay Nin isku dayay in uu dilo Gabar Soomaali ah
Booliska Magaalada Leicester City ee Dalka Ingiriiska ayaa gacanta ku dhigay Nin magaciisa lagu sheegay Moore,kaas oo gaari uu watay isku dayay in uu jiirsiiyo Gabar Soomaali ah oo waddada mareysay. Ninkan ayaa la horgeeyay Maxkamadda iyada oo marqaatiyada degaanka ay sheegeen in Moore uu isku dayay in uu dilo Seynab Xuseen oo ah Gabar Soomaali ah. Marqaatiyayaasha ayaa sheegay in Ninkan uu isku dayay in Gabadha oo waddada lugeyneysa uu gaariga ku dilo hayeeshee…
Khayre oo Dubai kula kulmay Mid ka mid ah Siyaasiyiinta Mucaaradsan dowladdiisa
Raisul Wasaaraha Xukuumada federaalka Somalia Xasan Cali khayre oo booqasho ku jooga dalka Imaaraadka Carabta ayaa magaalada Abu Dubai kula kulmay xildhibaan C/rashiid Maxamed Xiddig oo ka tirsan aqalka hoose ee Baarlamanka Somalia. Xildhibaan Xiddig ayaa ka mid ah Xildhibaano la baxay dallada Horusocod oo mucaaradnimo kala hor yimid dowlada wax yar ka dib markii la doortay Madaxweyne Farmaajo. Kulanka raisul Wasaare Khayre iyo Xildhibaan Xiddig ku dhexmaray dalka Imaaraadka ayaan la ogeyn inuu ahaa…
Faysal Waraabe iyo Gudoomiye Ciro oo dhaleeceeyay Muuse Biixi.Daawo
Posted on February 28, 2018 February 28, 2018 by Kaafi
https://www.youtube.com/watch?v=-E5XMfHD2NQ	Read More
Wasiir Bayle “Dadka Waa In Ay Canshuurta Bixiyaan Ama Isaga Tagaan”
Wasiirka Wasaarada Maaliyadda ee Xukuumada Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Bayle oo Warbaahinta kula hadlay Xafiiskiisa ayaa ka warbixiyay waxyaabihii u qabsoomay bishaan febraayo ee maanta ku eg. Wasiir Bayle ayaa Sheegay shaqo joojintii Ganacsatada ay bishaan sameeyeen in uu saameeyay lacagihii soo gali jiray Wasaaradda Maaliyadda. Bixinta Mushaaraadka ayuu sheegay in loogu tala galay dhamaadka bisha in la bixiyo, balse qeybo kamid ah ay bixiyeen, halka kuwa kalana ay qorsheynayaan in ay bixiyaan. Waxa uu tibaaxay…
Ciidamo Ajabani oo ahayn AMISOM oo lagu kordhinayo sugid Amniga Madaxtooyada Somalia
Warar hoose ayaa sheegaya in ilaalada madaxtooyada Soomaaliya lagu soo kordhinayo Ciidamo Ajanabi ah oo aan ahayn Ciidamada AMISOM ee ka jooga Soomaaliya hadaba qeybta ka ah ilaalinta xarunta Villa Somalia. Xogta aan heleyno ayaa sheegaya in Agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya Fahad Yaasiin iyo Taliyeyaasha Ciidamada Soomaalida ay ka shireen qaabka ugu haboon ee weerarada Al-Shabaab looga weecin karo xarunta madaxtooyada Soomaaliya,islamarkaana la helo Ciidamo tababar caalami ah heysta. Ciidamo ka socda Dowladdo shisheeye sida Qadar…
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waraaqaha Aqoonsiga ka guddoomay Danjiraha cusub ee dalka Spain u qaabilsan Soomaaliya Mudane Javier Garcia De Viedma. Madaxwaynaha iyo Safiirka oo ay weheliyaan Wasiir Ku Xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Diblumaasiyiin ka tirsan labada dal ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dhinac iyo arrimaha ay ka rajaynayso Dowladda Federaalka Soomaaliya in dowladda Spain ay kala shaqayso. Madaxwayne Farmaajo ayaa tilmaamay in mudnaanta…
Raisul Wasaaraha Swedan oo Shil gaari ku galay Magaalada Stockholm (Daawo Sawirro)
Posted on February 27, 2018 by Queen Kiin
Raisul Wasaaraha dalka Sweden Stefan Löfven ayaa shil ku galay Wadada E4 ee magaalada Stockholm isagoo ku sii socday Magaalada Upsalla. Gaariga Raisul Wasaaraha ayaa ka baxay wadada E4 waxaana uu ku dhacay biraha loo sameeyay wadada ee loogu tala galay inay gawarida soo celiyaan sida ay faafiyeen warbaahinta dalkaas. ”Wax dhibaato weyn ma dhicin, dhaawacna ima soo gaarin waxaa uu ahaa shil yar laakiin waxaa u sheegi lahaa dadka inay iska ilaaliyaan fogaanta jidka”…
Daniele Donati oo gaaray Garawe lana kulmay Madaxweyne Gaas (Daawo Sawirada)
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa qasriga Madaxtooyada ee Garoowe ku qaabilay Madaxa FAO ee Soomaaliya Daniele Donati iyo wafdi uu hogaaminayay. Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Madaxa FAO Daniele Donati ayaa waxa ay kawada hadleen arrimo ay kamid ahaayeen, Kalluumeysiga, daaweynta Xoolaha iyo Xanaaneyntooda, beeraha, dhirta iyo daaqa iyo sidii wax looga qaban lahaa xaalufka deegaanka. Dhinaca kale, Madaxweynaha dawlad Goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ayaa uga mahadceliyey madaxa FAO…
Ar Annigaa, Dhiig Kar Ha Igu Riddin!!! Qore: Yahya Amir
Ar annigaa, dhiig kar ha igu riddin!!! Subax baa waxaan raacay nin saaxiibkeey ah Md. Nur oo ah ganacsade caan Ka ah magaalada xamar, waxaan tagnay xarun safaaradeed oo xamar Ku taal, oo baabuur uu kaga dagay. Barxada Safaardda waxaa noogu yimid Safiirkii Ajnabiga ahaa. barxada safaarada gudaheeda ah,waxaa laga qodayay god, waxaana ag tiil bir dheer. Waxaan weydiiyay safiirkii godkan, maxaa loo qodayaa?. Waxa uu yiri: godkan, birtan dheer ayaan ku mudayaa si aan…
AKHRISO: 4-Qodob oo sabab u noqday inuu fashil ku dhamaado Wadahadaladii Ganacsatada & DF
Ganacstada Gobolka Banaadir oo Maanta Shir Jaraaid ku qabtey Magaalada Muqdisho ayaa Daboolka ka qaadey in uu Fashimay Wada Xaajood Maalmahan u socdey Ganacstada Gobolka Banaadir iyo Wasaarada Maaliyada Dowlada Federaalka kaasoo la doonayey in lagu Xaliyo Khilaafka ka dhashey Canshuur kordhin lagu sameeyey Ganacstada Gobolka Banaadir . “Wada Xaajoodkii u dhaxeeyey Ganacstada Gobolka Banaadir iyo Wasaarada Maaliyada wax heshiiska oo ka soo baxay ma jiraan oo lagu Maareyn lahaa Cabashadii Ganacstada, waxayna wax ka…
Muqdisho oo Caawa Jawi Cusub ku jirta, Cabsi Xoogan & Gaari Qaraxyo wada oo garoonka Muqdisho ku wajahan
Wararka laga helayo magaalada Muqdisho ayaa sheegaya inay soo baxday digniin ku saabsan weerarro argagixiso oo Alshabaab dooneyso inay ka fuliso bar-tilmaameedyo ka tirsan magaalada Muqdisho. Ilo sirdoon oo ka tisan NISA iyo kuwa reer Galbeed ah ayaa lasoo weriyay inay ka digeen weerarro iyo qaraxyo lagu qaado Garoonka Diyaaradaha Muqdisho iyo laba hotel oo ku yaalla Wadadda Maka Almukarama, iyadoo ciidamada heegan la geliyay, lana sheegay in weerarrada ay dhacayaan wixii ka danbeeya 26…
Wasaarada Duulista Hawada Puntland oo ka Faalootay Natiijada Imtixaan ay Qaaday..Daawo
Posted on February 26, 2018 by Kaafi
https://www.youtube.com/watch?v=BCovLWh3qdI	Read More
Faysal Cali Waraabe oo Dhaleeceeyay DJabuuti..Daawo
https://www.youtube.com/watch?v=XMsMrb1t0E4	Read More
AKHRISO: Musharaxiinta Madaxtinimada Puntland oo C/wali Gaas uga digay mudo kororsi, iyo Xaaladda Tukaraq
Posted on February 25, 2018 by Queen Kiin
War qoraal ah oo ay soo saareen siyaasiin si weyn looga yaqaano Puntland horeyna u soo qabtay xilal kala duwan oo ay ku jiraan Wasiiro badan ayaa looga hadlay xaaladdihii ugu dambeeyey ee Puntland iyo dib u eegista Arrimaha Dastuurka ee Soomaaliya. Sidda lagu sheegay Nuqul qoraal ah oo ay heshay Warbaahinta waxay madashan oo la baxday Puntland FOCUS GROUP aad uga hadashay arrimaha ku saabsan welwelka ay ka qabto in Xukuumada Madaxweyne Cabdiweli Maxamed…
Mas’uul Ka Tirsan Mucaaradka Oo Qaban Qaabinaya Safarka Kheyrre Ee Imaaraadka? (Ujeedka)
Isbaddal wayn ayaa laga filayaa dhowaan Siyaasadda Soomaaliya, ka dib markii ay yeelatay weji aan horey looga baran, islamarkaana qaab cusub uu yeelan doono mucaaradnimada ka jirta dalka. Heshiis hordhac ah ayaa u dhexeeya dowladda iyo xisbiyada mucaaradka kaas oo la siin doono mid kasta oo kamid ah saami cayman oo golaha wasiirrada ah. Kheyrre ayaa dareemayay gooni iyo gaar gaar dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay, balse wax walba waxa ay is fududadeen markii uu…
RW Khayre oo kulan xasaasi ah la qaatay saraakiisha ciidanka amniga & Go’aan ka soo baxay
Howlgal ballaaran oo lagu xaqiiinayo amaanka ayaa la sheegay inuu caawa ka bilaabanayo magaalada Muqdisho. Arintan ayaa lagu go’aamiyey ka dib kulan maanta lagu qabtay xarunta Gaadiidka Booliska ee degmada C/casiis waxaana goob-joog ka ahaa Ra’iisul Wasaaraha Somalia, Xasan Cali Kheyre, Wasiirka Amniga, Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, Taliyeyaasha AMISOM Booliska iyo NISA. “Ka dib qaraxyadii habeenkii hore, tallaabadan waa mid aan ku xoojinayno amniga guud ee Caasimadda,” ayuu yiri Wasiirka Amniga Gudaha Soomaliya oo kulanka hadal…
Midowga Afrika ayaa si kulul u cambaareeyey weerarkii 23-kii bishan ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasoo ay ka dambeeyeen xoogag ka tirsanaa Ururka Al-shabaab. Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa howlgalka AMISOM danjire Francisco Madeira ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray ehelada dadkii weerarkaasi ku dhintay, wuxuuna caafimaad u rajeeyey dadkii dhaawacmay. Mr. Madeira ayaa sheegay Al-shabaab weerarkaasi uga dan lahaayeen argagixinta shacabka Soomaaliyeed, balse shacabka aysan marnaba ku niyad jabi doonin dhacdooyinkan oo kale….
AMISOM oo war la yaableh kasoo saartay dil Muqdisho ay ugu geysteen Askar ka tirsan Ciidamada Nabad Sugida Soomaaliya
Taliska AMISOM ayaa war ka soo saaray dilkii habeen hore ciidankoodu ugu geysteen Magaalada Muqdisho Askari ka tirsanaa ciidamada Nabad Sugida Soomaaliya oo ku sugnaa Bar control oo ku taalla agagaarka Km4 wadada garoonka Aadan cadde. Falka dilka ah ayaa waxaa geystay ciidamada dowladda Uganda ee qeybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM. Taliyaha ciidamada Uganda ee ku sugan Soomaaliya Jen. Paul Lokech ayaa sheegay in falka dilka ah uu dhacay markii loo diiday…
Juxa “Shacabka Soomaaliyeed Amni ahaan iyo Siyaasad ahaanba way dayacanyihiin”
Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaliya Cabdi Siciid Faarax (Juxaa) ayaa sheegay dadka Soomaaliyeed amni ahaan iyo Siyaasad ahaan intaba inay dayacan yihiin. Juxaa oo qoraal kooban soo dhigay Bartiisa xiriirka Bulshada ee (Facebook) ayaa wuxuu ku sheegay dadka Soomaaliyeed inay yihiin kuwa daalan, dalkana Siyaasad ahaan iyo amni ahaan intuba ay dayacan yihiin. Wasiir Juxaa, ayaa tilmaamay shacabka Soomaaliyeed inay haysato kalsooni xumo siyaasadeed, islamarkaana loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed la samata bixiyo….
Trump oo isugu yeeray madaxda Khaliijka & Washintong oo Arrimo Xasaasi ah looga hadlayo
Madaxweynaha Dalka Mareykanka Donlad Trump ayaa magaalada Washington ku casuumay madaxda waddamada ku jira Ururka Iskaashiga Khaliijka Carabta ee GCC loo soo gaabiyo. Madaxweynaha Mareykanka waxaa uu doonayaa in uu wax ka qabto xiisadda siyaasadeed ee u dhaxeysa Dalalka Imaaraadka,Sucuudiga,Baxreyn iyo Masar oo dhinac ah iyo dowladda Qadar oo dhinaca kale ah. Diblomaasiyiin badan ayaa rumeysan in khilaafka Khaliijka uu ka dambeeyo Mareykanka gaar ahaan Donald Trump,waxaana hadda uu doonayaa in isaga uu kala…
Dagaal xoogan oo Muqdisho ka dhacay & Xiisad wali taagan
Iska hor imaad hubeysan ayaa maanta magaalada Muqdisho ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda Federaalka oo kala ah Booliska iyo milateri. Dagaalka ayaa ka dhacay degmada Deyniile ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan inta u dhaxeysa Haanta dheer iyo xerada 77, halkaasoo ay saaka gaareen ciidamo Boolis ah oo wata Cagaf ay doonayeen inay ku burburiyaan guryo sharci darro ah. Iska hor imaad dhex maray labada dhinac ayaa keenay inuu ku dhaawacmo sarkaal ka…
Beelaha Arab iyo Habar-yoonis Shirkoodii London Maxaa kasoo Baxay..Daawo
Posted on February 25, 2018 by Kaafi
https://www.youtube.com/watch?v=rHzVc6lsjfQ	Read More
Wasiir ku tilmaamay Jabuuti Mid Neceb Horumarka Somaliland..Daawo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=GJrCmB4jRa0	Read More
Wasiirka Arimaha Gudaha Somaliland oo Amar kusoo Rogay Dagmada Ceel Afwayn..Daawo
https://youtu.be/VqJ-_zyFW2U?t=15s	Read More
Rag Hubaysan oo ka dagaalamaya Agagaarka Madaxtooyada iyo Ciidamo xoogan oo…
Posted on February 23, 2018 February 25, 2018 by Queen Kiin
Rasaas ayaa wali ka dhaceysa agagaarka xarunta Madaxtootada ee magaalada Muqdisho, waxaana wararka aan helnay sheegayaan in rag hubeesan ay ku jiraan meel aan ka fogeyn xarunta Madaxtooyada. Sida aan Wararka ku helnay rag hubeesan oo ka degay dhoor gaari ayaa ku jira dhabarka dambe ee Hotelka Siyaad oo kuyaala albaabka laga galo Madaxtooyada, waxaana ragaasi go’doomiyay Ciidamada ilaalada Madaxtooyada iyo kuwa NISA. Gaadiidka ay ka dageen ragaasi ayaa lasoo sheegayaa in ay yaalaan agagaarka…
Wasiir Maareeye oo ku goodiyey inuu ka baxayo dowladda federaalka Somalia
Posted on February 23, 2018 by Queen Kiin
Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ka hadlay wadahadalada la filayo iney mar kale isugu yimaadaan dowlada fedaraalka Soomaaliya iyo maamulka Somaliland. Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa dowlada uu ka mid ka yahay ee Soomaaliya ka dalbaday in laga guul gaaro wadahadalada maamul goboleedka Somaliland. Maareeye ayaa sheegay in isaguu yahay shaqsi matala shacabka reer Somaliland ee raba midnimada Soomaaliya, wuxuuna ku goodiyey inuu isaga baxayo dowlada haddii wadahadaladu…
DEG DEG: Qarax Xoogan oo ka dhacay Muqdisho iyo Rasaas laga Maqlayo
Dhawaqa rasaas ayaa laga maqlayaa nawaaxiga Masaajidka Isbaheysiga Magaalada Muqdisho iyo agagaarka Xerada Dhagaxtuur ay degan yihiin ciidamo. Si cad looma oga in la weeraray Xerada Dhagaxtuur, laakiin dhawaqa rasaasta waa meesha ay ka dhaceyso nawaaxigeeda. Xerada Dhagaxtuur ayaa waxa ay ku taalla ka soo horjeedka Xarunta Golaha Shacabka, waxaana ay saaran tahay laamiga dheer ee horumara Irida Madaxtooyadda. Dadka reer Muqdisho ayaa la fajacsan dhawaqa rasaasta Magaalada ka dhaceysa. Ciidamo ka tirsan dowladda oo…
Doorashada Kursi Ka Banaan BF Oo Muqdisho Ka Dhacaysa Iyo Madaxtooyada Oo Wasiir Beyle Digniin U Dirtay?
Magaalada Muqdisho Berri oo Sabti ah waxaa ka dhaceysa doorashada kursi ka banaan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Somaliya, Sida ay horay ushaaciyeen Guddiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka. Kursigan oo ay leedahay beesha Samaroon (Gadabuursi) ayaa ah kuwa Xildhibaanadiisa ay ka soo galaan deegaanada Somaliland, Waxeyna doorashadooda ka dhacdaa Magaalada Muqdisho. Waxaa 13-Kii February Sanadii hore ee 2017 ka geeriyooday Allaha unaxariistee Xildhibaan Siciid Xasan Geeddi oo mudo ka soo mid ahaa Baarlamaanka Somaliya. Marxuumka ayaa ku…
WAR CUSUB: Wasiir Caan ah oo Iska dhiibay Yurub & Warqad Iscasilaad ah oo uu usoo diray Madaxweyne.
Warar goordhow nasoo gaaray ayaa sheegaya in mid kamid ah golihii wasiirada maamulka Jubbaland uu qaxooti ahaan isaga dhiibay dal ku yaala Yurub. Wasiir Xasan Daahir Yarow Xasan Dheere ayaa tagay dalka Norwey halkaas oo uu magangalyo weydiistay sidaas waxaa sheegay xubno katirsan maamulka Jubbaland. Warka ayaa intaas ku daraya in Wasiirka uu Warqad iscasilaad ah usoo diray madaxweyne Axmed Madoobe markii u tagay Norwey isagoo usheegay inuu xilkaas isaga tagay. Qoraalka uu Wasiirka warqadda…